Iinwele zale mihla zamadoda | Amadoda aQinisekileyo
IsiJamani sasePortillo | | Isitayile esinenwele
Izitayile zeenwele zamadoda ziyatshintsha kwiminyaka edlulileyo kwaye ngokufika kweefashoni ezintsha kunye neendlela, kufuneka sizihlaziye ngokwethu ukuba sifuna ukuba nesitayile esihle. Kule nqaku siza kuthetha ngayo iinwele zanamhlanje zamadoda e-2018. Sifumana iinwele eziqala mfutshane kwaye zenziwe ngombala zide kwaye zibhidekile. Siza kuhamba ngonwele kwaye siza kukuxelela imida yesitayile ebisetyenziselwa ukwenza ezona zinwele zininzi kunye neenwele.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi iinwele zale mihla zamadoda e2018? Qhubeka ufunda kwaye uya kufumanisa okuninzi.
1 Izitayela zeenwele ze2018
2 Ezona ndlela zilungileyo zokuhamba kweenwele zamadoda 2018
2.1 Ukuphela kweenwele
2.2 Ulusu luyaphela
2.3 Iinwele ezingaphantsi
2.4 Ii-bangs ezinombhalo
Izitayela zeenwele ze2018
Kwaye iinwele zinokuba ngamawaka eendlela. Ngamnye unesitayile esimakishwe kwaye unokunika umahluko omkhulu nabanye. Bazisa ubuntu kumntu oyinxibileyo. Umntu onezinwele ezingakhathaliyo akafani nomnye osebenze ngakumbi. Ukuba ufuna ukuzama iindlela ezithile zika-2018, awukashiywa lixesha.
Inwele nganye izisa into ekhethekileyo kwaye uninzi lwazo lufuna iimveliso ezifanelekileyo ukuze iinwele zilunge ngokufanelekileyo. Hee madoda, iinwele ezimfutshane ziya kuhlala zithandwa. Mva nje iinwele eziphakathi kunye nobude obude ziye zathandwa kakhulu. Amadoda anokukhulisa iinwele zawo kwaye anxibe i-faux crest eneenwele ezimfutshane ukuya kweziphakathi. Oku kwandisa ukuguquguquka kunye neendidi kwiinwele.
Olunye usiko olubonwa njengoluthe rhoqo kwiinyanga ezidlulileyo kukuba kukushiya inxenye yeenwele ezinde ngasentla nokucheba emacaleni. Nangona kunjalo, i-undercut eyenziwe ngombala ngakumbi, imiphetho, ukubuna, i-undercut, i-trim, kunye nezinye izitayile zodidi zilunge ngokugqibeleleyo kwiinwele zamadoda zale mihla. Elona candelo lilungileyo kuko konke oku kukuba umphezulu omde ukwazile ukugqama kwezinye izitayile kwaye, ke ngoko, basebenzela zonke iintlobo zeenwele, uburhabaxa kunye nobude. Ngokukodwa, Abafana abaneenwele ezingqindilili, ezi-wavy kunye neenwele ezigobileyo abayi kungxama ukufumana iinwele ezinesitayile zokunxiba.
Ezona ndlela zilungileyo zokuhamba kweenwele zamadoda 2018
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukukhetha iinwele ezinde, eziphakathi, okanye ezimfutshane kunokwenza umahluko omkhulu kwisitayile somntu. Izinwele ezimfutshane zilula ukugcina kunye nokugcina isitayile sexesha elide. Abayifuni kangako imveliso encinci Ukuba ufuna ujongeko lomsebenzi kunye ne-voila. Izitayile ezinde ziyimfashini kwaye zinomtsalane.
Nangona kuyacetyiswa ukuba abantu abancinci badinwe okanye batyhutyhwe emacaleni, uninzi lwabo lukhetha ukusikwa kwesikere ngokugqitywa kwe-tapered. Okulandelayo, siza kubona nganye nganye iinwele zanamhlanje zamadoda kwaye ngokuqinisekileyo kuya kubakho eya kulungela ukhetho lwakho. Jonga ezinye zeendlela ezipholileyo kunye nezona zintle zokucheba iinwele ukuze zilungele bonke ubude kunye neentlobo zeenwele.
Ukuphela kokunqunyulwa kwembonakalo kukujongwa kwangoku okuqhubeka nokukhula ekuthandeni. Uphawu kukuba ichaza le nwele kunye nokuthamba ngokuthe ngcembe kubude beenwele. Ukuya emazantsi entloko, iinwele ziba mfutshane ngokuthe chu kwaye zinokuphela ziye kulusu. Kungoko igama le-gradient.
Zininzi izinto ezahlukileyo zokucheba iinwele emadodeni. Isigama siyadideka, kodwa siya kuzama ukuyenza icace kangangoko.
Ukusika okususiweyo kukho iindidi ezimbini: eziphakamileyo nezisezantsi. Inwele ephezulu yokucheba kukucheba okuphezulu kunye nesimbo esibi. Qala phezulu kumacala nasemva. Iinwele ngokuthe chu ziyehla ezantsi entanyeni.
Ngakolunye uhlangothi, i-gradient ephantsi iqala emaphethelweni okusika kunye nakwinwele, ngaphezulu kweendlebe. Ikhowuni ayibonakali kwezinye iindawo. Ukuphela okuphantsi kuhlala kuthathwa njengokucheba iinwele okulondolozayo kunye nobuchwephesha. Umphezulu ubonakalisa isikhumba esingaphezulu. Abafana banokudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zokufiphala, ezinje ngesikhumba esiphantsi okanye ukuphola okuphezulu.
Kucacile ukuba ukuba ufuna ukuyijonga kakuhle ukufumana ithoni ephezulu okanye ephantsi kwaye awazi ukuba yeyiphi eya kukusebenzela ngcono, Cela iingcebiso ngonwele wakho.
Olunye uhlobo lokucheba iinwele, olunobundlongondlongo ngakumbi nolugqithisileyo. Endaweni yokuncipha kunye nokuphela kweenwele ezimfutshane kakhulu, ukubala okungafaniyo kubandakanya ukuba nenwele okuzibandakanya nolusu. Olu hlobo lokujika umbala lunokubonwa kakuhle ngokudibanisa kunye neenwele ezimfutshane neziphakathi. Akuhambeki kakuhle neenwele ezinde. Kukwacetyiswa ukuba neenwele zobuso ezingqindilili ukwandisa imilo kunye neziphumo.
I-buzz inqunywe phezulu kunye nesikhumba esibunayo emacaleni sinesitayela esikhulu semikhosi. Icala elisezantsi lale hairstyle kukuba akunakubonelela ngeendlela ezahlukeneyo.
Enye yeenwele zanamhlanje zamadoda. Oku kunqunyulwa kubandakanya iinwele ezimfutshane emacaleni entloko kwaye zijikeleze ngasemva. Umahluko kwizinwele zangaphambili kukuba oku kusikwa kubude obunye kuphela. Kuya kufuneka iqale phezulu kakhulu njengoko isika iinwele ngaphezulu ukubonelela ngokwahlukileyo okomeleleyo phakathi komphezulu omde kunye namacala amafutshane.
Olona hlobo luqhelekileyo lolu hlobo lweenwele kukuphinda ubuye ngqo ngaphantsi. Ngaphandle koku, abantu abaninzi bayayidibanisa nezinye izitayile ngaphezulu, ezinje ngeenwele ezimdaka kunye neenwele ezilungisiweyo. Oku kunqunyulwa kwaqala njengehipster kakhulu, kodwa kuye kwatyholwa kwindawo yokucheba iinwele.
Imiphetho ngokubhekisele kwiinwele zale mihla zamadoda zihamba ngemigca. Kunyaka omnye bakwimfashini kwaye ngomnye abakho. Kulonyaka we-2018, imiphetho ebunjiweyo ibe yifashoni kakhulu kumadoda aneenwele ezigobileyo. Kungenxa yokuba Iinwele ezimanzi nezisongelayo kunokuba nzima ukuzilawula.
Ngaphandle koko, ukongeza i-fringe emfutshane kwinkangeleko yakho kunokuba yindlela elula yokutshintsha ukusika kwakho. Nokuba ufuna ii-angled bangs ukubonisa ubunjani okanye umbala weenwele zakho, okanye ii-bangs ezingacacanga ekubekeni ubuso bakho, le nwele inokuhambelana nayo nayiphi na inkangeleko yendoda.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso kunye neenwele unokukhetha eyona ilungele isitayile sakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Iinwele zale mihla zamadoda